2017 Munich Guide Oktoberfest
Yurub Germany Munich & Bavaria
Dadku waxay dhigayaan surwaalahooda (aka Lederhosen ) 184-kii Oktoberfest ee Munich . Tani waa xafladaha ugu weyn ee adduunka oo leh in ka badan 6 milyan oo qof ee soo booqda waxay cabaan wax ka badan 6 milyan litir oo ah biir ah.
Sannadkan waxaa ku jiri doona beelaha caadiga ah , brats iyo culeyska dhaqanka Bavarian oo leh Hagahayaga illaa 2017 Oktoberfest oo ku wargelinaya taariikhaha muhiimka ah, cusbooneysiinta ammaanka iyo isbedelka Fest ee sanadkan.
Qaar ka mid ah dadka soo booqday waxay muujiyeen walaac ay ka qabaan soo jiidashada dalxiis aad u weyn oo ka mid ah weerarrada argagixisada Yurub ee dhowaan ka dhacay Berlin , Paris , Brussels ... Waxaa jiray xitaa weerarkii argagixisada ee Oktoberfest ka hor, 1980-kii. oo ay ku dhinteen 200 oo qof oo ay ku dhaawacmeen qarax bambo-gacmeedyo farabadan. Weerarku wuxuu ahaa fal argaggixisannimo oo aad u xun ee argagixisanimada ka dib dagaalkii Jarmalka ee Jarmalka .
Inkastoo hanjabaadu wali yar tahay, magaalada Munich ayaa si adag u shaqeysay si ay u bixiso tallaabooyin badbaado oo ammaan ah. Sanadihii la soo dhaafay waxay ku qarashgareeyeen in ka badan hal milyan euro si kor loogu qaado ammaanka.
Markii ugu horeysay ee soo booqdo, waxay u baahnaan doontaa inay u soo gudbiso amniga si ay ugu soo gasho Oktoberfest. Waxaa jiri doona sagaal goobood oo koontarooli doona heerarka dadweynaha waxayna bixiyaan jeegaga bacda, iwm. Waxaa jiri doona joogitaan booliis oo muuqda, iyo weliba eeyyo badan oo dhar cad, iyo eeyaha bambo-boobka.
Bixi baasaboorka / aqoonsigaaga jeegaga.
Xasuuso in bacaha waaweyn iyo boorsooyinka la mamnuuco, iyo sidoo kale socodka carruurta ee Sabtida, Maalinta Jarmalka Jarmalka (maalinta xiritaanka) iyo 18kii subaxnimo ee maalin kasta. Mamnuucid wakhti kasta: dhalooyinka quraaradaha, gasacadaha la riixo, alaabta dharka leh ama midabaynta iyo walxaha loo isticmaali karo sida hubeysiga, jarista ama hubka firfircoonida.
Dhinaca wanaagsan, dadkani waxay xakameynayaan tallaabooyinka ay macnahoodu tahay in xarumaha teendhooyinka ay hoos u dhacaan, kuraasta way ka sii badan yihiin weligood, jawiga gudaha wuu ka raaxaystaa.
Maalmaha gaadiidka ayaa la filayaa inay noqdaan
Sabtida Sebtember 23-deeda
Sabtida Sebteembar 30-keeda
Axadda Oktoobar 1-da
Si aad u heshid maalmo yar, waxaad isticmaashaa barometerka dadka badan ee Oktoberfest.
Marka laga reebo hanjabaadaha argaggixisannimada, xasuuso inaad isticmaasho dareen caadi ah Oktoberfest . Halkee dadka intooda badani ay joogaan xaflad iyo ku raaxaystaan ​​weelasha wanaagsan, waa inaad ka tagtaa alaabada qiimaha leh ee guriga, ha la galin dadka sakhraanka daran, oo isku day inaad ka fogaato inaad si xad dhaaf ah u sakhriso. Goobta luqadda Ingiriisiga, www.sicherewiesn.de, waxay bixisaa talooyin ammaan oo aad u fiican, haddii aad dhibaato ku qabsato wac 112, tirada guud ee Yurub ee xaaladaha degdegga ah.
Macluumaadka booqdaha ee 2017 Oktoberfest
Website : http://www.oktoberfest.de/en/
Taariikhaha : Sabtida, Sebtembar 16ka ilaa Talaado, Oktoobar 3, 2017. Markii uu waayeelka, Fest ayaa mar labaad loo kordhin doonaa Maalinta Jarmalka Midnimada (fasax qaran).
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee 2017 Oktoberfest:
Sabtida, Sebtembar 16-keeda 11.00 - Waadi iyada oo loo marayo Munich oo ku taalla teendhooyinka.
Sabtida Sebtembar 16-keeda 12:00 - Maqnaanshaha kowaad ee Oktoberfest by duqa magaalada Schottenhamel teendhada.
Axadda, Sebtembar 17-keeda laga bilaabo 10:00 - Axadda Gay
Talaado, Sebtembar 19ka ilaa 19:00 - Maalinta Qoyska; Dhammaan gaadiidka iyo bandhigyada waxaa lagu bixiyaa sicir-dhimis. Maalmaha Qoyska Talaadada
Khamiista, Sebteembar 21-keeda 10:00 - Caadiga Diinta Oktoberfest
Axadda, Sebtembar 24-keeda 11.00 - Bandhiga dhaqameedka ee "Oktoberfest" -ka
Isniinta, Oktoobar 3-deedii 12:00 - Gacan-cuusb oo ku saabsan tallaabooyinka loo yaqaan 'Bavaria' si loo soo afjaro dabbaaldegga
Khariidada : www.muenchen.de/int/en/events/oktoberfest/map.html
Tilmaamaha : Oktoberfest waxay ku taallaa halka ay joogaan ee Isisienwiese (sida caadiga ah loo yaqaan Wiesn ), 34.5 hektar oo hodon ah oo ku yaala Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt ee Munich (qiyaastii 20 daqiiqo oo ka soo wareegta bartamaha magaalada). Waxaa si sahlan loo gaari karaa gaadiidka dadweynaha ama baabuurta.
Haddii aad baabuur wadid, geli "Bavariaring, München" GPS iyo fiiri "cajalad Bavaria".
Si kastaba ha ahaatee, xusuusnow in gawaarida ay adagtahay in la helo meel u dhow agagaarka oo ay ku dhawaadaan ama u qaadaan gaadiidka dadwaynaha ugu fiican.
Gelitaanka Goobaha : Ogolaashuhu waa bilaash (marka laga reebo "Taariikhda Wies'n") oo lagu maamulo sagaal galaan.
U Adeega Wakhtiga : Beerka waxaa lagu iibin doonaa teendhooyinka laga bilaabo 12 duhurnimo ilaa 22:30 maalinta furitaanka; 10:00 ilaa 22:30 maalmaha shaqada; 9:00 illaa 22:30 Sabtiyada, Axadaha iyo ciidaha. Bandhigu wuxuu xirmi doonaa 23:30 3da Oktoobar. Kaliya marka laga reebo tani waa teendhada dhejiska ah ee xiran 13:00 (amaradii ugu dambaysay 12:15).
2017 Qiimaha Beerka : 2014 wuxuu ahaa markii ugu horeysay ee uu Moss ku baxo 10 euro. Sannadkan, Maß wuxuu u dhexeeyaa € 10.60 ilaa 10.95. Ku soo diyaari lacag badan oo lacag ah oo filaya in ay bixiso qiyaastii 40 euros maalintii oo loogu talagalay biirka, cuntada, iwm, iwm. Fischer-Vroni, Schottenhamel-Festhalle iyo Winzerer Fähndl waxay haystaan ​​beerka ugu qaalisan sannadkan halka Matxafka Mustaqbalka ee Old Wiesn iyo Familienplatzl (Xarunta Qoyska) ayaa ugu jaban. Liiska buuxa ee qiimaha beerta ee 2017.
Daryeelka wax yar oo khamri ah? Isku day mid ka mid ah 8-ka cabitaannada xagaaga aan khamriga ahayn .
2017 Naqshadeynta : Naqshad sanadeedkan ayaa si ballaaran loo soo bandhigi doonaa sawirada, boodhadhka iyo badeecadaha oo dhan. Iibso qoryo adag si aad guriga ula qabsato naqshad cusub oo muujinaysa Riesenrad (Ferris Wheel), Mass , Pretzel , iyo Lebkuchenherz (wadnaha gingerbread giant).
Xaggee Laga Joogaa : Magaaladu si wanaagsan ayaa loogu diyaargaroobayaa qulqulka weyn ee sanad walba. Taasi waxay tiri, qiimaha hudheellada hoyga inta lagu guda jiro xafladaha iyo aad u sii dheeraan karto booska nasashada ugu dambeeya. Xoogaa wax yar ayuu ka yar yahay maalmaha usbuuca iyo inta lagu jiro usbuuc dhamaystiran usbuuca koowaad ama dhamaadka usbuuca.
Fiiri Meelaha Munich ee loogu talagalay Meelaha Oktoberfest , ama daqiiqadaha ugu dambeeya ee Oktoberfest meelahan . Haddii aad rabto wax yaryar (iyo qiimo jaban), tixgeli mid ka mid ah Jarmalka ee xafladaha kale ee yaryar ee la yaqaan .
Tilmaamaha Hagaha ee Munich ee Safarrada
Sidee loo kaydiyaa miis fadhiya Oktoberfest
Booqo Ingiriisiga Jarmalka ee Munich
Khariidada Khariidada Khariidada
Talooyin ku saabsan booqashadaada Oktoberfest
Maalmaha ugu Badnaanta Maalinta ee Bavaria
Ruqsadaha darawalnimada Virginia (Tests, DMV Locations & More)
8 Baaskiilada ugu Wanaagsan ee Baadiyaha ah ee Bixi Lahaa 2018
10 Meelaha Pizza-yada ah ee Meelaha ku yaalla gudaha iyo Xaafadda Phoenix
10ka Waxyaabaha Ugu Sarreeya ee lagu Sameynayo Brussels
Miami Beach Guide Guide iyo Photo Gallery
10 Waxyaabaha Laga Yaabo Inaad Ogaato Goorta Booqanaya Old Montreal
Badbaadinta New Orleans Streetcar sida Gaadiidkaaga
Sida Loo Helo Dooxada Dhimashada iyada oo aan dhimanin jidka
Indy's Fikradaha Maalinta Romantic Taariikhda
Meelaha ugu Wanaagsan Adduunka ee Shaqada
8 Shey ee ugu wanaagsan ee TUMI ah ee alaabada la iibsado ee 2018
Sida Loogu Helo Lacagta Lacagta Lacagta Lacagta iyo Kuuboonada Long Island, NY.
Madxafyada Smithsonian iyo Khariidadaha
Cherry Blossom Tours ee Washington, DC